ရေအောက်ဓာတ်ကြိုး - ဝီကီပီးဒီးယား
Wolfe Island Wind Farm တွင်အသုံးပြုသော ရေအောက်ဓာတ်ကြိုဖြတ်ပိုင်းပုု
ရေအောက်ဓာတ်ကြိုး သည် ရေမျက်နှာပြင်အောက်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သယ်‌ဆောင်ရန်အတွက် ဖန်တီးထားသည့် ဓာတ်ကြိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အား ရေငုပ်သင်္ဘော"submarine" ဟူ၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားခေါ်ဆိုကြရသည်မှာ အဆိုပါ ဓာတ်ကြိုများသည် ရေငန်(မြစ်လက်တက်များ၊ ပင်လယ် နှင့် မြောင်းများ စသည်တို့)အောက်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သယ်ဆောင်နိုင်ကြပြီး ရေချိုဖြစ်သည့် မြစ်များနှင့် ကန်ကြီးများအောက်တွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သေးသည်။ ဥဒဟာရုဏ်အနေဖြင့် ကုန်းမကြီးနှင့် ဆက်သွယ်ထားသည့် စိန့်လောရင့်စ်မြစ်အတွင်းရှိ ကျွန်းကြီးများတွင် အသုံးပြုကြသည်ဖြစ်၏။
၁.၄ AC သို့မဟုတ် DC
၂ အသုံးပြုနိုင်သော ရေအောက်ဓာတ်ကြိုး
၂.၁ အေစီ ကြိုးများ
၂.၂ Direct current cable များ
ရေအောက်ဓာတ်ကြိုးများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများအား ဗို့အားမြောက်များစွာဖြင့် သယ်ဆောင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ဗဟိုအူသည် ဗဟိုတူ ပစ္စည်းများစုစည်းထားသည့် အတွင်းပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း ၊ လျှပ်စစ်ကာကွယ်မှုနှင့် အကာအကွယ်အလွှာများ (coaxial cable ပုံစံနှင့်ဆင်တူသည်) ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ် ဗဟိုအူ ၃ ချောင်းပါသည့် ဓာတ်ကြိုးများသည် ဒေတာအချက်အလက်များထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် အလင်းဖန်မျှင်များ သို့မဟုတ် အပူချိန်တိုင်တာရေးများအား သည်ဆောင်သည်ကို မကြာခန တွေ့ရှိရပြီး ၊ ထပ်လောင်းအနေဖြင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။
လျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုကြေးနီ သို့မဟုတ် အလူမီနီယံဝါယာကြိုးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အနိမ့်ဆုံးစျေးကွက်ဝေစုအနည်းငယ်ရှိ သည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်း ≤ 1200 mm2 အရွယ်အစား ရှိပြီး အသုံးအများဆုံးဖြစ်သော်လည်း ≥ 2400 mm2 အရွယ်အစား ကိုရံဖန်ရံခါပြုလုပ်သည်။ ဗို့အား ≥ 12 kV ရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် လုံးဝန်သဖြင့် insulator တွင်လည်းလျှပ်စစ်ပါ ၀င်သည့် gradient တစ်ခုနှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။ conductor သည်ပတ် ၀ န်းကျင် wires တစ်ခုစီမှသွယ်တန်းနိုင်သည်သို့မဟုတ် solid solid wire တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့သောဒီဇိုင်းများတွင် profiled wires (keystone wires) များသည် wires များအကြားအလွန်သေးငယ်သော interstices ရှိသော round round conductor တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းရန်တည်ဆောက်ထားသည်။
သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကို လျှပ်စစ် insulator တွင်လည်း အဆိုပါစပယ်ယာပတ်ပတ်လည်အဓိကအားဖြင့်ယနေ့အသုံးပြုကြသည်။ Cross-link polyethylene (XLPE) ကို ၄၂၀ အထိအသုံးပြုသည် kV system ကိုဗို့အား။ ဒါဟာကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် extrusion 30 ရက်တွေအကြောင်းအထိတစ်ဦး insulator တွင်လည်းအထူနှင့်အတူ, မီလီမီတာ; ၃၆ kV အတန်းအစားကေဘယ်ကြိုးများသည် ၅.၅ မှ ၈ အထိသာရှိသည် မီလီမီတာ insulator တွင်လည်းအထူ။ XLPE insulator တွင်လည်းအချို့သောဖော်မြူလာများကို DC အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဖိအားနိမ့်ဆီဖြည့်ထားသောကေဘယ်ကြိုးများသည်စက္ကူချပ်ပြားများနှင့်ကပ်ထားသောလျှပ်ကာတစ်ခုရှိသည်။ cable core တစ်ခုလုံးကို viscosity insulator တွင်ရှိသောအရည် ( mineral oil သို့မဟုတ် synthetic) ဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည်။ conductor ရှိအလယ်အလတ်ရေနံလမ်းကြောင်းသည် cable များအတွင်း 525 အထိရေနံစီးဆင်းမှုကိုပံ့ပိုးပေးသည် ကေဘယ်လ်သည်ပူနွေးလာသော်လည်းရေငုပ်သင်္ဘောများ၌ရေနံညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်များကြောင့်ကေဘယ်ကြိုးပျက်စီးခြင်းကြောင့်ရေအောက်ကေဘယ်ကြိုးများတွင်အသုံးပြုခဲသည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက် - ထိုးသွင်းထားသောကေဘယ်ကြိုးများသည်စက္ကူဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောလျှပ်ကာများပါရှိသော်လည်း impregnation ဒြပ်ပေါင်းသည်အလွန်ပြင်းထန်ပြီးကေဘယ်ကြိုးပျက်စီးသောအခါထွက်မသွားပါ။ Mass-impregnated insulator တွင်လည်း 525 အထိကြီးမားသော HVDC ကေဘယ်လ်ကြိုးများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည် kV
ကေဘယ်လ်ကြိုး≥ 52 kV သည်ရေထဲ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အတွက် extruded ခဲအိတ်နှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ အဘယ်သူမျှမကအခြားပစ္စည်းများယခုအချိန်အထိလက်ခံခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ ခဲသတ္တုစပ်ကိုသံမဏိကိုယ်ထည်ပေါ်တွင်ရှည်လျားစွာရှည်လျားစွာထုတ်လွှတ်သည် ကီလိုမီတာဖြစ်နိုင်သည်။ ) ဒီအဆင့်မှာထုတ်ကုန်ကို cable core လို့ခေါ်တယ်။ single-core ကြိုးများတွင် core သည်အာရုံစူးစိုက်မှုသံချပ်ကာဖြင့်ဝိုင်းထားသည်။ three-core cable မ်ားမွ cable cores သုံးခုအားသံချပ်ကာအသုံးမပြုမီလိမ်ပုံစံဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ သံချပ်ကာတပ်ဆင်ခြင်းသည်သံမဏိဝါယာကြိုးများဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်ကတ္တရာစေးကာကွယ်မှုအတွက်ကတ္တရာစေးဖြင့်စိမ်ထားသည်။ AC ကြိုးများတွင်ပြောင်းလဲသောသံလိုက်စက်ကွင်းသံချပ်ကာမှဆုံးရှုံးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်၎င်းကြိုးများကိုတစ်ခါတစ်ရံသံလိုက်မဟုတ်သောပစ္စည်းများ (သံမဏိ၊ ကြေးဝါ၊ ကြေးဝါ) တပ်ဆင်ထားသည်။
AC သို့မဟုတ် DC[ပြင်ဆင်ရန်]
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှုစနစ်အများစုသည် ပြောင်းလဲသော current (AC) ကိုအသုံးပြုကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထရန်စဖော်မာ များသည်လိုအပ်ပါက voltages ကိုအလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သည်။ high-voltage current current transmission သည် current current လိုင်း၏အဆုံးတစ်ခုစီတွင် converter တစ်ခုလိုအပ်ကာ alternating current grid တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကေဘယ်ကြိုး၏ capacitance အပိုထပ်ဆောင်းအားသွင်းရန်လိုအပ်လွန်းသည့်ရှည်လျားသောချိတ်ဆက် မှုတွင် ရေငုပ်စွမ်းအင်သုံးကြိုးများအသုံးပြုသောစနစ်သည်ခြုံငုံ။ ကုန်ကျစရိတ်နည်းနိုင်သည်။ ကေဘယ်ကြိုးတစ်ခု၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပလျှပ်ကူး ပစ္စည်းများ သည် capacitor ၏ပြားကိုဖွဲ့စည်းသည်။ အကယ်၍ ကေဘယ်လ်သည်ရှည်လျားပါက (ကီလိုမီတာသောင်းနှင့်ချီ။ ) အကယ်၍ ၎င်းသည် capacitance မှတဆင့်စီးဆင်းသောစီးဆင်းမှုသည် load current နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပေးထားသောအသုံးဝင်သောစွမ်းအင်ပမာဏအတွက်ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက်ပိုကြီးသောကြောင့်ပိုမိုကုန်ကျသော conductor များလိုအပ်လိမ့်မည်။
အ နိမ့်ပမာဏ သုံးဆင့်လျှပ်စစ် ပါ ၀ င်မှုအတွက် Alternating-current (AC) ရေငုပ်သင်္ဘော cable စနစ်များကို သုံး core cable များဖြင့်တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင် insulator တွင်ရှိသော conductor သုံးခုစလုံးကိုရေအောက်ကေဘယ်ကြိုးတစ်ခုအတွင်းသို့ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ကမ်းလွန်မှကုန်းတွင်းလေရဟတ်များအားလုံးကိုဤနည်းဖြင့်တည်ဆောက်သည်။
ထုတ်လွှင့်ပေးသောစွမ်းအင်ပမာဏပိုမိုရရှိရန်အတွက် AC စနစ်များသည်သီးခြား single-core ရေအောက်ကေဘယ်ကြိုး ၃ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တစ်ခုစီတွင်သီးခြားလျှပ်ကူးလျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုနှင့်အဆင့်သုံးလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်စီးကြောင်း၏အဆင့်တစ်ခုကိုသယ်ဆောင်ထားသည်။ စတုတ္ထတူညီသော cable ကိုအခြားသုံးခုနှင့်ထပ်တူထပ်ခါထပ်ခါပေါင်းထည့်သည်။ အဓိကကြိုး ၃ ခုအနက်တစ်ခုမှတစ်ခုပျက်စီးသွားပြီးအစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်္ဘော ကျောက်ဆူး သို့ပေါ့ဆစွာကျဆင်းသွားခြင်းကြောင့်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်လျော်သော လျှပ်စစ် switching စနစ်ဖြင့်စတုတ္ထမြောက် cable သည်အခြားသုံးခု၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအစားထိုးနိုင်သည်။
ဗို့အား ( kV )
Texada ကျွန်း သို့ Nland Creek Terminal အထိ ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာပြည်မကြီး ဗန်ကူးဗားကျွန်း / Dunsmuir စခန်း 525 ဆယ့်နှစ်သီးခြား၊ ဆီဖြည့်သည့်အဆင့်တစ်ခုတည်းကြိုးများ။ အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 1200 MW ။
</br> ( စပိန် - မော်ရိုကို အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု) Fardioua, မော်ရိုကို
</br> ဂျီဘရောလ်ရေလက်ကြား မှတဆင့် 400 ၂၆ 1998 ၂၀၀၆ မှဒုတိယစက္ကန့်  အများဆုံးအနက် - ၆၆၀ မီတာ (၂,၁၇၀ ပေ) ။ 
Norwalk, မှန် CT, USA Northport, NY, USA ၁၃၈ ၁၈ တစ် ဦး က3core ကို, XLPE insulator တွင်လည်း cable ကို
စစ္စလီကျွန်း မော်လတာ 220 ၉၅ ကီလိုမီတာ (၅၉ မိုင်) ၂၀၁၅ မော်လတာ - စစ္စလီကျွန်း interconnector
ဆွီဒင်ပြည်မကြီး Bornholm ကျွန်း, ဒိန်းမတ် ၆၀ ၄၃.၅ ကီလိုမီတာ (၂၇.၀ မိုင်) အဆိုပါ Bornholm Cable ကို
အီတလီပြည်မ စစ္စလီကျွန်း 380 ၃၈ ကီလိုမီတာ (၂၄ မိုင်) 1985 Messina of Pylons ကိုအစားထိုးခြင်း
ဂျာမနီ Heligoland ၃၀
Negros ကျွန်း Panay ကျွန်း, ဖိလစ်ပိုင် ၁၃၈
ဒေါက်ဂလပ် Head, Isle of Man, Bispham, Blackpool, အင်္ဂလန် ၉၀ ၁၀၄ ကီလိုမီတာ (၆၅ မိုင်) 1999 အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့သွားသော Isle of Man သည် အဓိကဆက်သွယ်မှု ၃ ခုဖြစ်သည်
</br> အဆိုပါ Wolf ကကျွန်းလေတိုက်သည် Kingston, ကနေဒါ ၂၄၅ ၇.၈ ကီလိုမီတာ (၄.၈ မိုင်) 2008 ၂၄၅ ကေဗွီအတွက်ပထမသုံးခု XLPE ရေငုပ်သင်္ဘောကြိုး
ကိပ် Tormentine, New Brunswick Borden-Carleton, PEI ၇.၈ ကီလိုမီတာ (၄.၈ မိုင်) 2017 မင်းသားအက်ဒွပ်ကျွန်းကြိုးများ
Direct current cable များ[ပြင်ဆင်ရန်]
Baltic Cable Germany Baltic Sea Sweden 450 ၂၅၀ ကီလိုမီတာ (၁၆၀ မိုင်)
Basslink mainland State of Victoria Bass Strait island State of Tasmania, Australia 500 ၂၉၀ ကီလိုမီတာ (၁၈၀ မိုင်)
BritNed Netherlands North Sea Great Britain 450 ၂၆၀ ကီလိုမီတာ (၁၆၀ မိုင်)
Cross Sound Cable Long Island, New York Long Island Sound State of Connecticut [ကိုးကားချက်လိုသည်]
East–West Interconnector Ireland Irish Sea Wales/England and thus the British grid ၁၈၆ ကီလိုမီတာ (၁၁၆ မိုင်) Inaugurated 20 September 2012
Estlink northern Estonia Gulf of Finland southern Finland 330 ၁၀၅ ကီလိုမီတာ (၆၅ မိုင်)
Fenno-Skan Sweden Baltic Sea Finland 400 ၂၃၃ ကီလိုမီတာ (၁၄၅ မိုင်)
HVDC Cross-Channel French mainland English Channel England ၇၃ ကီလိုမီတာ (၄၅ မိုင်) very high power cable (2000 MW)[ကိုးကားချက်လိုသည်]
HVDC Gotland Swedish mainland Baltic Sea Swedish island of Gotland the first HVDC submarine power cable (non-experimental)[ကိုးကားချက်လိုသည်]
HVDC Inter-Island South Island Cook Strait North Island ၄၀ ကီလိုမီတာ (၂၅ မိုင်) between the power-rich South Island (much hydroelectric power) of New Zealand and the more-populous North Island
HVDC Italy-Corsica-Sardinia (SACOI) Italian mainland Mediterranean Sea the Italian island of Sardinia, and its neighboring French island of Corsica[ကိုးကားချက်လိုသည်]
HVDC Italy-Greece Italian mainland - Galatina HVDC Static Inverter Adriatic Sea Greek mainland - Arachthos HVDC Static Inverter 400 ၁၆၀ ကီလိုမီတာ (၉၉ မိုင်) Total length of the line is 313 km (194 mi)
HVDC Leyte - Luzon Leyte Island Pacific Ocean Luzon in the Philippines[ကိုးကားချက်လိုသည်]
HVDC Moyle Scotland Irish Sea Northern Ireland within the United Kingdom, and thence to the Republic of Ireland 250 ၆၃.၅ ကီလိုမီတာ (၃၉.၅ မိုင်) 500MW
Kii Channel HVDC system Honshu Kii Channel Shikoku 250 ၅၀ ကီလိုမီတာ (၃၁ မိုင်) in 2010 the world's highest-capacity[ကိုးကားချက်လိုသည်] long-distance submarine power cableတမ်းပလိတ်:Inconsistent (rated at 1400 megawatts). This power cable connects two large islands in the Japanese Home Islands
Konti-Skan Sweden Kattegat Denmark 400 ၁၄၉ ကီလိုမီတာ (၉၃ မိုင်)
Maritime Link Newfoundland Atlantic Ocean Nova Scotia 200 ၁၇၀ ကီလိုမီတာ (၁၁၀ မိုင်) 500 MW link went online in 2017 with two subsea HVdc cables spanning the Cabot Strait.
Nemo-Link Belgium North Sea United Kingdom 400 ၁၄၀ ကီလိုမီတာ (၈၇ မိုင်)
Neptune Cable State of New Jersey Atlantic Ocean Long Island, New York 345 ၁၀၃ ကီလိုမီတာ (၆၄ မိုင်)
NordBalt Sweden Baltic Sea Lithuania 300 ၄၀၀ ကီလိုမီတာ (၂၅၀ မိုင်) Operations started on February 1, 2016 with an initial power transmission at 30 MW.
NorNed Eemshaven, Netherlands Feda, Norway 450 ၅၈၀ ကီလိုမီတာ (၃၆၀ မိုင်) 700 MW in 2012 the longest undersea power cable
Skagerrak 1-4 Norway Skagerrak Denmark (Jutland) 500 ၂၄၀ ကီလိုမီတာ (၁၅၀ မိုင်)4cables - 1700 MW in all
Western HVDC Link Scotland Irish Sea Wales 600 ၄၂၂ ကီလိုမီတာ (၂၆၂ မိုင်) Longest 2200 MW cable, first 600kV undersea cable
Peloponnese နှင့် Crete ဂရိနိုင်ငံကြား 2x 150kV AC ဆက်သွယ်မှု။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်တွင်အမြင့်ဆုံးအနက် ၉၅၀ မီတာနှင့်အတူကြိုး ၁၃၅ ကီလိုမီတာရှိသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှည်ကြာဆုံး AC ရေငုပ်သင်္ဘောဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။   
အတ္တလန္တိတ်လေကော်နက်ရှင် အကြား ဝဲ နဲ့ နယူးဂျာစီပြည်နယ် အလားအလာများအကြား, ဗာဂျီးနီးယား နှင့် နယူးယောက်မြို့  
500 မဂ္ဂါဝပ်စွမ်းရည်, 165 km DC က ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး လမ်းကြောင်းသည်ကနေဒါနိုင်ငံ Newfoundland နှင့် Labrador နှင့် Nova Scotia ပြည်နယ်တို့အကြားဖြစ်သည်။ 
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင်ဒိန်းမတ်နှင့်ဒတ်ခ်ျအော်ပရေတာ (Energinet.dk နှင့် TenneT ) တို့သည် ၂၉၄ COBRAcable အတွက် Siemens နှင့် Prysmian ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်များကိုပေးအပ်ခဲ့သည် နှစ်နိုင်ငံကို ၇၀၀ ပံ့ပိုးပေးမည့်ရေငုပ်သင်္ဘောကီလိုမီတာ 320 မှာ MW ဂီယာ kV DC သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။  
EuroAsia Interconnector, 1,520 ကီလိုမီတာကီလိုမီတာရေငုပ်သင်္ဘောပါဝါ cable ကို, အထိ ၃ ကီလိုမီတာ (၁.၉ မိုင်) အထိအနက်သို့ရောက်ရှိ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်တွင်အာရှနှင့်ဥရောပကိုဆက်သွယ်ထားသောမဂ္ဂါဝပ် ၂၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ကိုထုတ်လွှင့်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည် (အစ္စရေး - ဆိုက်ပရပ်စ် - ဂရိ)   
Champlain Hudson ပါဝါ Express, 335 မိုင်လိုင်း။ အွန်တိုရီယို ၊ တိုရွန်တိုရှိ ဂီယာထုတ်လုပ်သူများကုမ္ပဏီသည် " Hudson မြစ် ကိုအသုံးပြုရန်ရည်မှန်းချက်အရှိဆုံးရေအောက်ဂီယာစီမံကိန်းအတွက်" ကိုအဆိုပြုထားသည်။ Montreal ၏တောင်ဘက်မှ စ၍ မိုင် ၃၃၅ မိုင်မျဉ်းကြောင်းသည် Champlain ရေကန် ၏အောက်ခြေတွင် နယူးယောက်စီးတီး အထိ Hudson ၏အိပ်ရာအောက်သို့ဆင်းသွားလိမ့်မည်။ " 
Puerto Rico သည် ဗာဂျင်းကျွန်းစုများ
သီရိလင်္ကာ သို့ 400 kV HVDC အိန္ဒိယ 
220 kV HVAC, 225 megawatts, 117 ကီလိုမီတာ မော်လ်တာ-စစ္စလီကျွန်း interconnector Magħtab, မော်လ်တာနှင့်အကြား Ragusa, စစ္စလီကျွန်း ။ 
၁၆.၁ ကီလိုမီတာ ၁၆၁ ကီလိုမီတာရှိ ထိုင်ဝမ် သည် PengHu ကျွန်းများရှိ ရေငုပ်သင်္ဘောစွမ်းအင်ကေဘယ်စနစ် (TP-Cable) ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်တွင် ထိုင်ဝမ်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ (Taipower) ၏ပထမဆုံးရေငုပ်သင်္ဘောစီမံကိန်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးရန်စီစဉ်ထားသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ထိုင်ဝမ် - ပန် ဟူးပင်လယ်ရေအောက်ကေအိုင်အေ စီမံကိန်း အားထိုင်ဝမ်ရှိ လျှပ်စစ်ဇယားကွက် အားတရုတ်သမ္မတနိုင်ငံမှ Penghu ကျွန်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတည်ပြုခဲ့သည်။ 
ဗြိတိသျှနှင့်အိုက်စလန်အစိုးရများသည် ဘူမိအပူစွမ်းအင် ကိုစကော့တလန်သို့သယ်ဆောင်ရန်အတွက် စကော့တလန် နှင့် အိုက်စလန် တို့အကြားကေဘယ်လ် ( အိုက်စင် ) ကိုတည်ဆောက်ရန် "တက်ကြွသောဆွေးနွေးမှု" တွင်ပါ ၀ င်နေသည်။ 
နော်ဝေ နှင့်ဂျာမန်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများသည် NORD တည်ဆောက်ရန်သဘောတူခဲ့သည် LINK, 2018. နေဖြင့်နှစ်နိုင်ငံအကြား 1400 မဂ္ဂါဝပ်အထိထုတ်လွှင့်နေတဲ့ရေငုပ်သင်္ဘော cable ကို 
ဗြိတိသျှနှင့် ဒိန်းမတ် စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများ ( National Grid and Energinet.dk, အသီးသီး) သည် Viking Link, 740 ကိုလေ့လာရန်သဘောတူခဲ့သည် 2022. နေဖြင့် 1400 မီဂါဝပ်ထုတ်လွှင့်နှင့်အတူနှစ်နိုင်ငံပေးကီလိုမီတာ cable ကို  
ဗြိတိန်နှင့်နော်ဝေစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများ ( National Grid နှင့် Statnett ) တို့သည် ၇၃၀ NSN Link ကိုပူးတွဲတည်ဆောက်ရန်သဘောတူခဲ့ကြသည် ၂၀၂၁ တွင် ၁,၄၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ထုတ်လွှင့်နိုင်မည့်နှစ်နိုင်ငံကိုပေးမည့်ကီလိုမီတာကီလိုမီတာ။ ထိုကဲ့သို့သောကေဘယ်ကြိုးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှည်ဆုံးဖြစ်ပြီး ၁ ဒသမ ၂ မှ ၂ ဘီလီယံကြားကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ 
Channel Islands ကျွန်း ရှိ Alderney ကျွန်း မှတဆင့် ဂရိတ်ဗြိတိန် နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ကြား FAB ။ 
EuroAfrica Interconnector, ၁,၇၀၇ ဦး ကီလိုမီတာကီလိုမီတာရေငုပ်သင်္ဘောပါဝါ cable ကို, အထိ ၃ ကီလိုမီတာ (၁.၉ မိုင်) အထိအနက်သို့ရောက်ရှိ အာဖရိကနှင့်ဥရောပ (အီဂျစ် - ဆိုက်ပရပ်စ် - ဂရိ) ကိုဆက်သွယ်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားမဂ္ဂါဝပ် ၂၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ်ကိုပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်တွင်ပို့လွှတ်နိုင်သည်။    
↑ Connecting Crete to mainland Greece's power supply။
↑ Crete – Peloponnese Interconnection. Selection of tenderers for the cables of one of the most important submarine interconnection projects globally။
↑ Crete – Peloponnese 150kV AC Interconnection.။
↑ "Construction under way at new Paulsboro port"။
↑ Lower Churchill Project။
↑ Cable to the Netherlands - COBRAcable။ 20 January 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Siemens and Prysmian will build the COBRA interconnection between Denmark and the Netherlands။2February 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The EuroAsia Interconnector document, October 2017.
↑ "ENERGY: End to electricity isolationastep closer"၊ 2017-10-19။ 2017-01-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Cyprus group plans Greece-Israel electricity link"၊ 2012-01-23။
↑ Application for Authority to Sell Transmission Rights at Negotiated Rates and Request for Expedited Action
↑ Underwater Cable an Alternative to Electrical Towers, Matthew L. Wald, New York Times, 2010-03-16, accessed 2010-03-18.
↑ HVDC Transmission & India-Sri Lanka Power Link 2010
↑ Taiwan power company-Taipower Events။ 17 May 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Iceland's volcanoes may power UK"၊ 2012-04-11။
↑ "Agreement to realize electricity interconnector between Germany and Norway" Archived 22 February 2013 at Archive.is, Statnett 21 June 2012. Retrieved: 22 June 2012.
↑ Kabel til England - Viking Link။ 23 March 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2015-11-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Denmark - National Grid။3March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2016-02-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The world's longest interconnector gets underway။ 28 June 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2016-02-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ FAB website fablink.net, as well as (fr) Interconnexion France Aurigny Grand-Bretagne website rte-france.com, site of Réseau de Transport d'Électricité.
↑ The EuroAfrica Interconnector
↑ EuroAfrica 2,000MW cable boosts Egypt-Cyprus ties, Financial Mirror February 8, 2017
↑ EEHC, Euro Africa Company sign MoU to conductafeasibility study to link up Egypt, Cyprus, and Greece, Daily News Egypt,February 6, 2017
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရေအောက်ဓာတ်ကြိုး&oldid=638188" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။